I-bloggin 'ayilulanga! Nokuba ngeVox | Martech Zone
I-bloggin 'ayilulanga! Nokuba ngeVox
NgoMvulo, nge-11 kaDisemba ngo-2006 NgoLwesihlanu, Oktobha 24, 2014 Douglas Karr
uhlaziyo: Iqonga leVox lavalwa ngo-2010.
Njengangoku nje, ndinika ingcinga eninzi ngokubonelela ngamaxwebhu ngakumbi nangokuthetha esidlangalaleni kubhloga. Ngoba? Ukubhloga akukho lula! Iinkampani ziyakuqonda oku… ukuzibeka 'ze' ngaphandle kwewebhu kunokuba sisicwangciso esiliqili. Ngaphandle kwesicwangciso kunye nomxholo, nangona kunjalo, itekhnoloji.
I-Bloggin 'akukho lula.
Ngokuqinisekileyo, iibhlog ezinkulu zenza ukuba zibonakale zilula. Baphosa ibhlog yabo kwaye badibana namawaka eedola kwizibhengezo. Abantu bayabaphosa imali. Kodwa kuthekani ngoMama kunye nePop abafuna ukubeka ibhlog elula malunga neshishini okanye usapho? Iwebhu kubahlalutyi, igunya, ukukhangela kweinjini yokukhangela, inqanaba, ukulandelela umkhondo, iipings, ii-post slugs, amagqabantshintshi, ingxelo eyenziwe ngumsebenzisi, iindidi, ukumakisha, ukutya, ukutya kubahlalutyi, Imirhumo ye-imeyile… kwanele ukwenza ukuba nabani na abaleke ekhala!
Kulula kum kuba bendikulo nyaka kwaye ndawasusa onke amacandelo okubhloga. Ndiyayifumana. Ndingu geek. Kukuzonwabisa kwam, umsebenzi kunye nothando.
Umntwana omtsha kwibhloko ngu face. Ndabona ezinye izikrini zeVox zokutyhala umxholo (iaudiyo, ividiyo okanye umfanekiso) kwisithuba kwaye ndichukumisekile yindlela elula ngayo. Kodwa kulapho kulula ukuyeka khona.
Nantsi umfanekiso weskrini:
Akukho makhonkco angaphantsi kwama-30 kwiphepha lam lebhlog lezinto ekufuneka zenziwe. Ndifuna nje ukulayisha umfanekiso webhlog kwaye ndonzakele ukudida umfanekiso webhlog womfanekiso weprofayile. Ukuba uza kuzenzela ngokwakho njengesixhobo esilandelayo "esilula" sokubhloga, uqinisekile njengokuba ungcono ukwenza kube lula. Akukho ndlela ndingatyhala ngayo umhlobo wam kwesi sixhobo. Ndikhetha ukuthetha ngazo WordPress or zebloga.
Mhlawumbi enye yeengxaki ngeVox kukuba yayichukunyiswe ziibhlog zebhlogi. Ukuba i-SixApart ifuna ngenene ukwenza iqonga lokubhloga elilula, bekufanele ukuba bajonge abantu abangazange babhlog ngaphambili. Andiqinisekanga ukuba ngawaphi amanqanaba okwamkelwa okunyuka kwiVox, kodwa ndiyathandabuza ukuba ayamangalisa.
I-adCenter yeAdsense… oku akunakulunga
Ngomhla wama-12 ku-Disemba 2006 ngo-7: 47 AM
Wenza inqaku elilungileyo uDoug. Ixesha elizayo kunye nokukhula kubhloga kunye nabantu abaza kwibhlog yakho ngabantu "abaqhelekileyo". Abanye abantu abanokungazi nokuba lithetha ntoni igama lokubhloga namhlanje.
Ngomhla wama-25 ku-Disemba 2006 ngo-10: 58 PM
Ndijonge iVox xa yayiqala ukwazisa kwaye khange ichukunyiswe yiyo. Inesembozo sefestile esithandekayo, kodwa xa isimba nzulu, ayisiyonto imnandi okanye kulula ukuyisebenzisa. Ndicinga ukuba banokusebenzisa ukutsala ngaphezulu kwinkqubo.